MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardHappy Friday service guide book mm - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
Happy Friday Data Carry +
Happy Friday ဆိုတာဘာလဲ။
၂၀၁၉ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၃) ရက်နေ့မှစ၍ သောကြာနေ့တိုင်းတွင် Htaw B ဝယ်ယူပါက အပိုဆောင်း Htaw B Balance ရရှိမှာဖြစ်ပြီး Data Carry Plus Pack ဝယ်ယူပါက အပိုဆောင်းဒေတာ(MB) များရရှိနိုင်မည့် ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
သောကြာနေ့မှာ Data Carry Plus Pack ဝယ်ပါတယ်။ မည်သည့်အပိုဆောင်းလက်ဆောင်ရရှိမှာပါလဲ။
သက်တမ်း Htaw B ဖုန်းဘေလ်ရယူရန်
အပိုဆောင်းဒေတာ Direct USSD Common USSD
၆၉၉ကျပ် 415MB 15MB
[ကြိုက်ရာသုံးဒေတာများကို သယ်ဆောင်အသုံးပြုနိုင်သည်) *777*1# *777# *224#
၇၉၉ကျပ် 630MB 20MB *777*2#
၉၄၉ကျပ် 860MB 30MB *777*3#
၁၂၉၉ကျပ် 1180MB 35MB *777*4#
၁၇၉၉ကျပ် 1630MB 55MB *777*5#
၂၆၉၉ကျပ် 2450MB 70MB *777*6#
၄၄၉၉ကျပ် 4100MB 120MB *777*7#
၈၉၉၉ကျပ် 8200MB 240MB *777*8#
၁၇၉၉၉ကျပ် 16400MB 450MB *777*9#
၂၆၉၉၉ကျပ် 24500MB 800MB *777*0#
Htaw B အပိုဆောင်းလက်ဆောင်ကို ဘာတွေသုံးလို့ရမှာလဲ။ ဘယ်လောက်ကြာကြာသုံးနိုင်မှာပါလဲ။
Htaw B အပိုဆောင်းလက်ဆောင်ကို MPT ဖုန်းအချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုရန်၊ စာတိုပေးပို့ရန်နှင့် သုံးသလောက်ပေးအင်တာနက်အတွက် သုံးစွဲသူဝယ်ယူသည့်ပက်ကေ့ချ်သက်တမ်းအတိုင်း အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ ဥပမာ – သောကြာနေ့တွင် ဖုန်းဘေလ် ၁,၀၀၀ကျပ်ကို Htaw B ဖုန်းဘေလ် ၅,၀၀၀ကျပ်ပြောင်းလဲပါက အပိုဆောင်းလက်ဆောင် ၂၀၀ ကျပ်ရရှိမှာဖြစ်ပြီး [စုစုပေါင်း ၅၂၀၀ကျပ်ကို] ၁၅ ရက်ကြာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
သောကြာနေ့မှာ အခြားပက်ကေ့ချ် (Social pack, night time data pack, voice pack) တွေဝယ်ယူပါတယ်။ အပိုဆောင်းခံစားခွင့်ရရှိမှာလား။
မရရှိပါ။ MPT ၏ လူကြိုက်အများဆုံးပက်ကေ့ချ်များဖြစ်သည့် Htaw B နှင့် Data Carry Plus Packs များဝယ်ယူပြီး အပိုဆောင်းခံစားခွင့်များရယူလိုက်ပါ။
သောကြာနေ့မှာ Htaw B Pack ဝယ်ပါတယ်။ မည်သည့်အပိုဆောင်းလက်ဆောင်ရရှိမှာပါလဲ။
(ကျပ်) Htaw B ဖုန်းဘေလ် (ကျပ်) အပိုဆောင်း Htaw B ဖုန်းဘေလ် သက်တမ်း ဝယ်ယူရန် လက်ကျန်ငွေစစ်ဆေးရန်
၁၀၀၀ ကျပ် ၅,၀၀၀ ကျပ် ၂၀၀ ကျပ် ၁၅ ရက် *5001# *500# *224#
၂၀၀၀ ကျပ် ၁၀,၀၀၀ ကျပ် ၄၀၀ ကျပ် ၃၀ ရက် *5002#
၅၀၀၀ ကျပ် ၂၅,၀၀၀ ကျပ် ၁,၀၀၀ ကျပ် ၆၀ ရက် *5005#
သောကြာနေ့မှာ အပိုဆောင်းလက်ဆောင်ရတာအပြင် တခြားပြောင်းလဲသွားတာတွေရော ရှိပါသလား။
မရှိပါ။ ပုံမှန်ဈေးနှုန်းနှင့် သက်တမ်းတို့အပြင် Data Carry Plus ၏ Carry-over function၊ Htaw B ၏ အထူးနှုန်းထားများအစရှိတဲ့ ခံစားခွင့်များအတိုင်း ပုံမှန်ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
ဘယ်နည်းလမ်းကိုသုံးပြီး ဝယ်ယူရင် အပိုဆောင်းခံစားခွင့်ရမှာလဲ။ ဝယ်ယူရမည့်နည်းလမ်းကို သတ်မှတ်ထားပါသလား (ဥပမာ - MPT4U၊ USSD အစရှိသဖြင့်)။
သတ်မှတ်မထားပါ။ MPT4U၊ *777#၊ *500#၊ *106# အစရှိသဖြင့် မည်သည့်နည်းလမ်းကိုမဆို အသုံးပြု၍ သောကြာနေ့တွင် Htaw B နှင့် Data Carry Plus Packs အသစ်ဝယ်ယူလိုက်တိုင်း အပိုဆောင်းခံစားခွင့်များ ရရှိမှာပါ။
Friday မှာ Htaw B နဲ့ Data Carry Plus Packs ကို တခြားသူများသို့ လက်ဆောင်ပေးလို့ရပါသလား။
ရပါတယ်။ Htaw B Pack ကိုလက်ဆောင်ပေးမည်ဆိုပါက *500# မှတစ်ဆင့် လက်ဆောင်ပေးမည့် Pack ကို ရွေးချယ်၍“2. Gift”ကို ရွေးချယ်ကာ လက်ဆောင်ပေးလိုသည့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်နှိပ်လိုက်ပါ။
Data Carry Plus Pack ကိုလက်ဆောင်ပေးမည်ဆိုပါက *106*2# (သို့) *777# မှတစ်ဆင့် လက်ဆောင်ပေးမည့် Pack ကို ရွေးချယ်၍“2. Gift (သို့) 2.လက်ဆောင်ပေးမည်”ကို ရွေးချယ်ကာ လက်ဆောင်ပေးလိုသည့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်နှိပ်ပြီး လက်ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။
သောကြာနေ့တွင် လက်ဆောင်ပေးပါက လက်ဆောင်ရရှိသူသည် သက်ဆိုင်ရာ Htaw B (သို့) Data Carry Plus Pack ၏ သောကြာနေ့တွင်ရရှိမည့် အပိုဆောင်းခံစားခွင့်များပါ ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
Happy Friday ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်က ဘယ်အချိန်ထိပါလဲ။
စက်တင်ဘာလ (၁၃) ရက်နေ့မှစ၍ ထပ်မံမကြေညာမီအချိန်အထိ။